ALIEXPRESS အပေါ်တစ်ဦးကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံကိုရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို - ALIEXPRESS - 2019
အတော်များများခေတ်မီလက်ပ်တော့ built-in ပါပွီ On-board ကိုဘလူးတုသ်။ ဒါဟာသတ်မှတ်ချက်ကမှတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များသိရှိစေရန်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ယခုသင်သည်ထိုသို့သောကီးဘုတ်, မောက်စ်, စပီကာသို့မဟုတ်နားကြပ်အဖြစ်ကြိုးမဲ့ကိရိယာကိုဆက်သွယ်နေကြသည်။ သင်သည်သင်၏ laptop ကိုဤ devices များတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဝယ်ယူရန်သွားနေတယ်ဆိုရင်သင်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦး Laptop ကိုဘလူးတုသ်လည်းမရှိရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကအနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အဆိုပါ Windows ကို operating system ကိုသင်အသုံးပြုသွားမည်ပစ္စည်းကိရိယာများအကြောင်းကိုအားလုံးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့မှခွင့်ပြုမယ့် built-in device ကိုမန်နေဂျာရှိပါတယ်။ သံ Laptop ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်သည့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိကြောင်းထက်အခြားအများအပြားအထူးအစီအစဉ်များရှိပါတယ်။ ဘလူးတုသ်အခြိနျအဖြစ်သတ်မှတ်ထိုသူနှစ်ယောက်နည်းလမ်းများသုံးပြီးဖျော်ဖြေနေသည်ရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်။ သူတို့တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြရအောင်။
သင့်ရဲ့ Laptop ကိုမှကြိုးမဲ့စပီကာကိုချိတ်ဆက်ပါ
Method ကို 1: Speccy
Speccy အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်စနစ်အပေါ်အသေးစိတ်ဒေတာများစုဆောင်းခြင်း, တစ်ဦးကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုအာရုံစိုက်နေသည်။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောနဲ့ Bluetooth ကို install ပြုလုပ်လျှင်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစစ်ဆေးမှုများအနည်းငယ်ခြေလှမ်းများ၌ပြစ်မှားမိသည်:
ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ၏တရားဝင် site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု, ဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ်ပါနဲ့ install လုပ်ပါ။
အဆိုပါ Speccy စတင်ပြီးနောက်အလိုအလျောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ငန်းစဉ်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ရှာသောအချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့ရန်, အဆုံးမှထိုသို့စောင့်ပါ။
ကိုသွားပါ "Peripheral" တစ်ဦးကဘလူးတုသ်ဒေတာနဲ့လိုင်းလည်းမရှိရှာပါ။ သငျသညျကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိသေးလျှင်, သင့် Laptop ကိုကောင်းစွာကလက်နက်ကိရိယာတွေကိုတည်တတ်၏ဒါ။
အချို့သောလက်ပ်တော့တွင်, ဘလူးတုသ်ရံမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်က search function များအားသုံးစွဲဖို့ရှိသည်။ အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "View"pop-up menu ကိုဖွင့်လှစ်ရန်။ သွားပါ "ကိုရှာပါ".
လိုင်းတွင် "ရှာရန်" ဝင်ရောက် ဘလူးတုသ် နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကိုရှာပါ"။ ရှာဖွေရေးအလိုအလျှောက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့်ချက်ချင်းရလဒ်တွေကိုရလိမ့်မယ်။
က Speccy သင်သို့မဟုတ်သင်အခြားအလားတူ software ကိုအသုံးပြုချင်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင့်လျော်သောမပါလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အောက်က link ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။ ဒါဟာအသေးစိတျ၌ဤဆော့ဖ်ဝဲလူကြိုက်အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်များဖော်ပြသည်။
Method ကို 2: Windows ကို Device Manager
အဆိုပါ Windows operating system အတွက်, အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ထားပြီးအဖြစ်သင် installed ပစ္စည်းကိရိယာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုမယ့် built-in Controller ကိုရှိပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဘလူးတုသ်အဆိုပါ Device Manager ကနေတဆင့်လက်တော့အပေါ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်:
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Start" နှင့်ကိုသွား "Control Panel ထဲက".
တစ်အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ "Device Manager" ထိုသို့ဖွင့်လှစ်။
အပိုင်း Expand "ကွန်ယက် Adapter က"သငျသညျမျဉ်းကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်ဘယ်မှာ "စက်ပစ္စည်းဘလူးတုသ်".
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ် - ထိုကဲ့သို့သောလိုင်း Device Manager ထဲမှာမပင်လျှင်, ကွန်ပျူတာ Bluetooth ကိုထောကျပံ့ပေးမထားဘူးဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဟာ့ဒ်ဝဲယာဉ်မောင်းနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြုတ်နိုင်ပါသည်။ လိုအပ်သောဖိုင်များကို Download laptop ကိုထုတ်လုပ်သူဒါမှမဟုတ် DVD ကို၏တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ Windows7ကိုအပျေါဘလူးတုသ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းဒေါင်းလုပ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကနောက်ထပ်၌ဤဆောင်းပါးတွင်ကြည့်ပါ။
Windows7ကိုများအတွက်ဘလူးတုသ်-Adapter ကိုယာဉ်မောင်းကို Download လုပ်နှင့် install
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Bluetooth ကို Set
အင်တာနက်ကိုအလိုအလျှောက်ရှာဖွေ drivers တွေကိုပျောက်ဆုံး install ပြုလုပ် software ကိုပြည့်ဝ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးခြားဆောင်းပါး၌ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုယ်စားလှယ်များစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေးရန်။
လက်ပ်တော့ကို PC ကဘလူးတုသ် installed လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကြောင့်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမကအထူးကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အသိပညာလိုအပ်သောကြောင့်ပင်တစ်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူဒီတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်, အရာအားလုံးရိုးရှင်းပြီးရှင်းပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ဘလူးတုသ်ကို Windows 8, Windows 10 ကိုဖွင့်ခြင်း
ဗီဒီယို Watch: Gebroeders Rossig - Alie Exprezz (သြဂုတ်လ 2019).